Tilt Brush dia fampiharana Google hisarihana zava-misy virtoaly | Famoronana an-tserasera
Tilt Brush dia fampiharana sary mahavariana an'ny Google ho an'ny zava-misy virtoaly
Mihaona ny zava-misy virtoaly amin'izao fotoana izao amin'ny fotoana tena miavaka, indrindra taorian'ny fisehoan'ny vokatra sasany tao amin'ny Mobile World Congress natao tamin'ny herinandro lasa teo tany Barcelona. Fihaonana iray izay nandalo ny filokana isan-karazany avy amin'ny mpanamboatra isan-karazany hitondra antsika any amin'ny tontolo sy faravodilanitra hafa.
Tilt Brush dia fampiharana ho an'ny misarika amin'ny zava-misy virtoaly izay novidin'i Google tamin'ny volana aprily tamin'ny taon-dasa. Fampiharana iray izay ahafahanay mahafantatra an'i Google no niandraikitra ny fanatsarana azy tato anatin'ireto volana ireto mba hitondrana antsika traikefa ara-javakanto ho an'ireo izay afaka mampiasa azy io amin'ny fitaovana virtoaly misy.
Ny iray amin'ireo fitaovana ahafahana mampiasa azy dia ny HTC Vive, marina indrindra ilay manolotra traikefa virtoaly tsara indrindra izao dia izao. Miaraka amin'ity rindranasa ity dia hanan-tarehy eo alohan'ny masontsika isika amin'ny 360 degre ary ho an'ny spherical manontolo, midika izany fa hiatrika fialamboly zavakanto isika izay hanana volabe.
Efa hitantsika ny animator mahafinaritra avy amin'ny Disney Glen Keane sary miaraka amin'ity fitaovana HTC noforonina niaraka tamin'i Valve ity. Nasehon'i Keane taminay ny fahaizany tsy mampino amin'ny fanaovana sary rehefa mamorona tarehin-tsoratra Disney manana endrika izay efa noteneniko ary manome traikefa nahafinaritra an'ny Tilt Brush.
Ity fampiharana ity dia eo ambanin'ny fehikibony paleta mahafinaritra ny vokatra sy ny borosy mba hahafahan'ny mpanakanto mahazo tombony betsaka amin'izany. Tsipika manify sy matevina ary karazana famaranana izay manahaka teknika sy fitaovana samihafa hamoahana ny lalan-java-kanto amin'ny alàlan'ny fialam-boly 3D izay manamarika làlana vaovao izay lalovan'ny mpanakanto maro. Tena azontsika antoka izany.
Un làlana vaovao manokatra ny kanto amin'ny alàlan'ny zava-misy virtoaly ary hamoaka azy tsy ho ela eto isika miaraka amin'ny tolo-kevitr'ireo mpanao sary sy mpanao hosodoko izay mandalo amin'ny iray amin'ireo fitaovana ireo izay hanomboka hanatratra ny tranon'ny maro eran'izao tontolo izao.
Manana izany ianao fampahalalana misimisy kokoa avy amin'i Tilt Brush avy eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Tilt Brush dia fampiharana sary mahavariana an'ny Google ho an'ny zava-misy virtoaly
Ny tontolon'ny ririnina ao amin'ny Russia an'i Aleksey Savchenko
Kopia 50 sy lohahevitra fandraharahana 2016 maimaim-poana ho an'ny XNUMX